08/18/14 ~ MM Daily Star
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ရေတစ်ဝက် ကုန်းတစ်ဝက်တွင်ေ...
အီရတ်ရှိ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို နှိမ်နင်းမည့် ဆုံးဖြ...
အော်ရီဒူး ဆင်းမ်ကတ်များရောင်းချခါစက ဝယ်ယူမှုများသော...
အစ္စလမ္မစ်နိုင်ငံတော်အဖွဲ့မှ တရုတ်နိုင်ငံ၊ စင်ကျန်ပြ...
တာဝန်သိအငြိမ်းစား အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး တရုတ်လုပ်...
စိုပြေ ပြောသည့်. ~ ထူးအိမ်သင်သီချင်း ဘယ်သူမှ မဆိ...
Miss Myanmar International 2014ဆု ခင်ဝေဖြိုးဟန်ရရှ...
ပဲခူးရေဘေးသင့်ဒေသများအတွက် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် H...
မြန်မာ့ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ရေတစ်ဝက် ကုန်းတစ်ဝက်တွင် ရောက်နေ ၆ ဂဏန်းကျရောက်သောရက်၌ ဆယ်ယူနိုင်မည်ဟုဆို
19:00 ဘာသာရေး, သတင်း No comments
စေတီခေါင်းလောင်းကြီး တွေ့ ပြီဆိုတာတကယ်လား။ ရေပေါ် ဘယ်တော့ပေါ်မှာလဲဆိုသည့် မေးသံတွေ ကို နေရာတိုင်းမှာ ကြားနေရသည်။ ယင်းကဲ့ သို့ မေးမြန်းသံများ ကြားနေရသော်လည်း တိကျသည့် အဖြေပေးနိုင်မည့်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်မှမရှိဘဲ မိမိထင်မြင်ချက်များ ကိုသာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ပြော ဆိုနေကြဆဲသည်။
ခေါင်းလောင်းကို စိတ်ဝင်စား သည့် လူအချို့က ''ခေါင်းလောင်းကြီးတွေ့ တယ်ဆိုတာ လူတွေ လျှောက်ပြောနေတာ ပါ။ ရေထဲမှာတွေ့တဲ့ ခေါင်းလောင်းက ဓမ္မ စေတီခေါင်းလောင်းဆိုတာ ဘယ်သူက ဘယ် လို အတည်ပြုပေးမှာလဲ''ဟု ဆိုသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ် ယူခြင်းအား စောင့်ကြည့်သူ များပြားနေပြီး ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေးကို လူ တိုင်း စိတ်ဝင်စားလာကြသဖြင့် ဆယ်ယူ ရေးအခြေအနေကို သိရှိရန် ဆယ်ယူရေး လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာသို့ နေ့စဉ်သွားရောက်ကြည့် ရှုနေသူများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်တော်က ဒေါပုံမြို့နယ်က ပါ။ ဆယ်ယူတဲ့အချိန်ကစပြီး ကြည့်တယ်။ ၉ ရက်ကစပြီး မနက်တစ်ခေါက် ညနေတစ် ခေါက် လာကြည့်ပါတယ်။ ခေါင်းလောင်း ကြီးကိုတွေ့ရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန် ပေါ့၊ ဝမ်းသာတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အထင် ပေါ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း၅ဝပဲ'' ဟု ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်း ဆယ်ယူရေးကို စောင့်ကြည့်နေသည့် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လေကြောင်း မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(ငြိမ်း)ဦးမြရွှေက ပြော သည်။
ခေါင်းလောင်းကြီး ပေါ်လာနိုး ဖြင့် ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးနှင့် အနီးစပ် ဆုံးနေရာဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့ သာကေတ မြို့နယ် ရှုခင်းသာ ပန်းခြံအနီး အေးရှားပွိုင့် ဘိုးလင်းစင်တာဝင်းအတွင်းသို့ သွားရောက် သူများ တစ်နေ့တခြား များပြားနေသည်။
''တစ်နေ့ကို လာလိုက်သွားလိုက် နဲ့ လူတွေ ထောင်ချီရှိတယ်။ အခုခြောက် ရက်မြောက်ရှိပြီ။ ရှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တယ်။ သူတို့က သုံးထပ်သင်္ဘောပေါ်မှာ နေကြ တယ်။ ရေထဲကို သွားလို့တော့ရတယ်။ မှတ် တိုင်အမည်းရောင်ကို ကျော်လို့မရဘူး'' ဟု ဦးမြရွှေက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ် ယူရေးကို စိတ်ဝင်စားသူများထဲတွင် သံဃာ တော်များလည်း ပါဝင်နေပြီး ဆယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများကို လာရောက်ကြည့်ရှုကြသည်။
ရတက်ချိန် ရေလယ်အထိ သွား ကြည့်ပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး ယခုကာလ သည် မိုးများသော မိုးရာသီအချိန်ဖြစ်သော ကြောင့် ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်နေသည့် ရန်ကုန်မြစ်အလယ်သို့ သွား ရောက်ကြည့်ရှုသူများမှာ အန္တရာယ်နှင့် ကြုံ တွေ့နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအချိန် မိုးရာသီကာလ တွင် ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း လေတိုက်နှုန်းမှာ လည်း ပြင်းထန်ကာ သမ္ဗန်စီးသူများအား လှိုင်းလုံးများ ရိုက်ခတ်ခြင်း၊ သမ္ဗန်လူးခြင်း ခံရသည်။
လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေသည့် ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန် ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့များကို သြဂုတ် ၁၄ရက်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သည်။
''သြဂုတ် ၇ရက်ကစတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ် ကောင်းကောင်းလုပ်ဖြစ်တာက ၁၁ရက်က လုပ်ငန်းစ ဖြစ်တာပါ။ ခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူနိုင်ဖို့ ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ဝင်၇ဝလောက်ရှိတယ်။ ရေငုပ်သမားက ၁ဝ ယောက်ရှိ ပါတယ်'' ဟု ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့မှ ဦးဝင်းမြင့်(ရွှေအုန်းပင်) က ပြောသည်။
ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ယခု လရာသီသည် ကြာသပတေးအိမ်ထိုင်နေသောကြောင့် ဆယ်ယူနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကြောင်းလည်း ယင်း က ဆိုသည်။
''အခုချိန်က ကရကဋ်ရာသီ၊ ကြာသပတေး အိမ်ထိုင်နေတာကြောင့် တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတဲ့ နိမိတ်ပဲ။ ခေါင်းလောင်းကြီးပြန်ပေါ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်တယ်။ ဦးက ကံတရားကို အားထားတယ်။ ပြည်သူ တွေရဲ့မေတ္တာ များများလိုချင်တယ်။ ဒါပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ဖြစ်တယ်။ နာမည်၊ ဂုဏ်လိုချင်လို့ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးစွဲလဲမရှိပါဘူး။ မွန်ခေါင်းလောင်းက ပြည်သူအား လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်''ဟု ဦးဝင်းမြင့်က ဆက်လက်ပြောသည်။
ခေါင်းလောင်းတည်ရှိမည့်နေရာကို ရေတပ် တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖူးသောဦးစံလင်းက ခန့်မှန်းနိုင် ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ခေါင်းလောင်းတည်နေရာ အတိအကျ ကို သိရှိနိုင်ရန် ရေငုပ်သမားများက ပြန်လည်ရှာဖွေနေ ခြင်းဖြစ်သည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရေ ကြောင်းပညာရှင်များ၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာရှင်များ၊ ဂမ္ဘီရပညာရှင်များနှင့် အကြား အမြင်ပညာရှင်များကလည်း ယခုလို အကြံပြုသုံးသပ် ထားသည်။
''ကျွန်တော်ကတော့ စပိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ပါ။ ရေငုပ်ကျွမ်းကျင်ပြီး ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင် တာ ရေအောက်မှာရှိတဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီးကိုရှာဖို့ ဂျီပီ အက်စ်ပါတဲ့စက်ကိရိယာကို ရေအောက်ထဲချပြီး အဲဒီ စက်မှာ ရှာတွေ့တော့မှ ရေငုပ်သမားတွေ ဆင်းရှာသင့် တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းရှာ နေမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တွေကြာဦးမှာပဲ။ ကျွန်တော် ဒီကိုလာကြည့်တယ်ဆိုတာကလဲ ကျွန်တော် ဘာများကူ ညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာ လာကြည့်တာပါ'' ဟု ရေငုပ်ကျွမ်း ကျင်သူ စပိန်နိုင်ငံမှ Mr. Pablo Lawyel ကပြောသည်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရပ်တွင် ရေ အောက်ရှေးဟောင်းရှာဖွေရေး သုတေသနပညာရပ် တစ်ခုရှိကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင် မွန် တိုင်းရင်းသား ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်ဦးချစ်စံ ဝင်းက ''ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာမှာ ရေအောက်ရှေး ဟောင်းသုတေသန ရှာဖွေရေးပညာရှိတယ်။ အဲဒါက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှိတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ရေပြင်ပတ်လည် ကိုသံပြားရှည်တွေနဲ့ စက်ဝိုင်းပုံကာရံပြီး အလယ်ကရေ တွေကို စုပ်ထုတ်ရတယ်။ ရေတွေကုန်ပြီဆိုတော့မှ မြေ သားပေါ်လာမယ်။ အဲဒီမြေသားကို ထပ်တူးလိုက်ရင် တော့ ရေအောက်မှာ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို သုတေသနပြု လို့ရပါပြီ။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူလို့ရသည် ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ မွန်သမိုင်းကတော့ ပြောင်းလဲ သွားမှာမဟုတ်ဘူး''ဟု ပြောသည်။
သမိုင်းပညာရှင်ဦးချစ်စံဝင်းက ''ခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေးမှာ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနလဲ ပါသင့်တယ်။ သမိုင်း၊ ရှေးဟောင်းစတဲ့ ပညာရှင်တွေပါတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု လဲ ဖွဲ့စည်းပြီး ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးမှာ ပါဝင်သင့် တယ်''ဟု သုံးသပ်သည်။
ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးကို မွန်တိုင်းရင်း သားများက မကန့်ကွက်သော်လည်း ဆယ်ယူပြီးနောက် စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
''မွန်တွေစိုးရိမ်တာက ဆယ်ပြီးတော့မှ မွန် ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမှာ စိုးရိမ်တာ။ နောက်ထပ် စိုး ရိမ်တာတစ်ခုက ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို ရွှေတိ ဂုံကုန်းတော်ပေါ် ပြန်ရောက်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်ပါတယ်'' ဟု မွန်တိုင်းရင်းသားသမိုင်းပညာရှင် ဦးနိုင်မောင်တိုး က ပြောသည်။
ယခုအချိန်ကာလသည် ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းဆယ်ယူရန်အတွက် အတိတ်နိမိတ်ကောင်းမွန် ကြောင်းလည်း ဂမ္ဘီရပညာရှင်ထံမှသိရသည်။
''ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးနဲ့ ပတ် သက်လို့ ဆရာ့ရဲ့ ဂမ္ဘီရအမြင်အရဆိုရင်တော့ နိမိတ် ကောင်းတာ တွေ့ရတယ်။ မျှော်လင့်ချက် များတယ်။ ရှာ ဖွေရေးမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါရင် ပိုနီးစပ်မယ်။ ပိုအောင် မြင်မယ်။ တားရော့ပညာနဲ့ နိမိတ်ဖတ်တော့ တွေ့မယ့် နိမိတ်ရှိတယ်။ ရေတစ်ဝက် ကုန်းတစ်ဝက်မှာရှိနေတယ်။ ရောက်နေတယ်။ မြို့နယ်နှစ်ခုကြား၊ ရပ်ကွက်နှစ်ခုကြား မှာ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ၆ ဂဏန်း၊ ၆ လပိုင်း၊ ၆ ရက်၊ ဂဏန်းနှစ်ခုပေါင်း ၆ ရတဲ့ရက်တွေမှာ ခေါင်းလောင်း ပေါ်လာနိုင်တယ်။ အခု ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူတဲ့နေရာ ကိုသွားဖို့ရှိတယ်။ မေတ္တာပို့ပေး၊ ဆုတောင်းအားပေးဖို့ သွားမှာပါ။ ကမ္ဘောဇအိုးစည်ဝိုင်းနဲ့သွားမယ်'' ဟု ဂမ္ဘီရ ပညာရှင် ဆရာဇင်ယော်နီက ပြောသည်။
''ခေါင်းလောင်းကြီးက တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ သမိုင်းတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ သာသနာရေးနဲ့ဆိုင် တဲ့သမိုင်းဖြစ်တယ်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေး က နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ အစိုးရက ဦး ဆောင်ပြီးလုပ်သင့်တယ်။ အစိုးရက လုပ်ဆောင်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ငွေအား၊ လူအား၊ နည်းပညာ အားတွေ ရရှိ နိုင်ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက လုပ်ရင်တော့ မပြည့်စုံမှုတွေရှိနိုင်တယ်'' ဟု သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို ဓမ္မစေတီမင်း မှ (ခရစ်နှစ်၁၄၇၁-၁၄၉၂)တွင် လှူဒါန်းထားခြင်းဖြစ် သည်။ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ခရစ်နှစ် ၁၄၇၆တွင် မွန် ပညာရှိအမတ်ကြီး ဗညားအိမ်ကိုသွန်းလုပ်ရန် တာဝန် ပေးခဲ့သည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးသည် ကြေးပိဿာချိန် ၁၈ဝဝဝဝ ရှိကာ ဇောက်၁၂တောင်၊ အဝရှစ် တောင်ရှိကြောင်း သမိုင်းပညာရှင်များ ၏ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
ခါင်းလောင်းကြီးသွန်းပြီး နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၃၂ နှစ်ခန့်ကြာသောအခါ ခရစ်နှစ် ၁၆ဝ၈ ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဖိလစ်ဒီဘရစ်တို(ငဇင်ကာ)သည် အ မြောက်ပြုလုပ်ရန် ရွှေတိဂုံစေတီရင်ပြင်တော်မှ ဓမ္မစေ တီခေါင်းလောင်းကြီးကို ယူဆောင်သွားရာ သန်လျင်သို့ မရောက်မီ ပုဇွန်တောင်ချောင်းဝအရောက် သင်္ဘောဝမ်း ဗိုက်ကွဲပြီး ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးသည် ထိုအချိန် မှစ၍ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွား ကြောင်းသိရသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးမှာ စိတ် ဝင်စားမှု အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိလာပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များထက် ခေါင်း လောင်းရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများသာစတင်လုပ်ဆောင် နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအများ
မျှော်လင့်နေသော ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး တွေ့ရှိ ဆယ်ယူနိုင်ရန် နိုင်ငံ တော်အစိုးရ၏ အားပေးဆောင်ရွက်ပေးမှုများကို မျှော် လင့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အီရတ်ရှိ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို နှိမ်နင်းမည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ ချမှတ်
အီရတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများကို ကျူးလွန်နေသည့် အစ္စလာမ် နိုင်ငံတော် (IS) အဖွဲ အား နည်းသွား စေရန်အတွက် ကုလလုံခြုံရေး ကောင်စီသည် ၄င်းအဖွဲ့ကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့နေသည့် လမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသား တိုက်ခိုက်ရေး သမားများ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု တားဆီးရေး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို သောကြာနေ့တွင် ချမှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ဝင် များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဆင်ဂျာမြို့မှ (၄၅) ကီလိုမီတာ အကွာရှိ ကိုချို ကျေးရွာတွင် ယာဇီဒီ မျိုးနွယ်စုဝင် အမျိုးသား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ တို့အား အစ္စလာမ်ဝါဒီများက သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အနောက်နိုင်ငံ မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒေသခံများသည် အစ္စလာမ် ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခြင်း မရှိသည့် အတွက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယာဇီဒီမျိုးနွယ်စုဝင်များနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် အမေရိကန်သည် IS အဖွဲ့အား လေကြောင်းမှ ထိုးစစ်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမအကျော့ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရပ်သားများ ပုန်းအောင်းနေသည့် ဆင်ဂျာတောင်အား IS အဖွဲ့က ၀န်းရံ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို ဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက ပြောဆိုခဲ့သည်။
နယူးယောက်ခ်ရှိ ကုလလုံခြုံရေး ကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်နေချိန်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့၌ လည်း ဥရောပ သမဂ္ဂ နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများသည် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကျင်းပကာ အီရတ်ရှိ ကာ့ဒ် တပ်ဖွဲ့ ဝင်များအား လက်နက်များ အကူအညီ ပေးရန် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
အီရတ်တွင် ရှီယိုက်များ အကျိုးအလို့ငှာ အုပ်ချုပ်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံတွင်းလူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးမားစေခဲ့သည့် အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် နူရီအယ်လ်-မာလီကီက ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြာသပတေးနေ့တွင် သဘောတူညီခဲ့ သောကြောင့် အီရတ်နိုင်ငံသားများနှင့် အင်အား ကြီးနိုင်ငံများ စိတ်သက်သာမှု ရရှိခဲ့သည်။ မာလီကီ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြင်းသည် အီရတ်နိုင်ငံညီညွတ်ရေး အတွက် အဓိက ခြေလှမ်း တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်အမျိုးသား လုံခြုံရေး အကြံပေးအရာရှိ ဆူဆန်ရိုက်စ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကုလထွေချုပ် ဘန်ကီမွန်း ကလည်း မာလီကီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုခဲ့ပြီး အီရတ်တွင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးပါဝင်သော အစိုးရအဖွဲ့ကို အမြန်ဆုံး ဖွဲ့စည်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မာလီကီနေရာတွင် ဆက်ခံမည့်သူအဖြစ် အမည် စာရင်း တင်သွင်းခံထားရသည့် ဟိုင်ဒါ အယလ်အဘာဒီအား ထောက်ခံကြောင်း အီရန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ ကဲ့သို့ နိုင်ငံများက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတွင်းရှိ ဆွန်္နီများနှင့် ကာ့ဒ်များကို ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့် အတွက် နိုင်ငံတွင်း လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ ယင်း အတွက် မာလီကီတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ဝေဖန်မှုများရှိနေသည်။ မာလီကီရာထူးမှ နုတ်ထွက်မည်ဟု ကြေညာ ပြီးနောက်တွင် မာလီကီအစိုးရနှင့် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်လိုခြင်း မရှိခဲ့သည့် အန်ဘာခရိုင်ရှိ ဆွန်္နီမျိုးနွယ်စု (၂၅) ခုကလည်း IS အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
အော်ရီဒူး ဆင်းမ်ကတ်များရောင်းချခါစက ဝယ်ယူမှုများသော်လည်း ယခုအခါ လိုင်းမမိ၍ လူကြိုက်နည်းနေ
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့တွင် အော်ရီဒူး ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များအား စတင်ရောင်းချပေးသော ရက်ပိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ကောင်းမွန်ပြီး ပြင် ပပေါက်ဈေး ကျပ်ငါးထောင်ခန့်ရှိခဲ့ သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ကျပ်နှစ် ထောင်ခန့်သာဈေးရှိပြီး လူအကြိုက် နည်းပါးနေကြောင်း ဆင်းမ်ကတ် ရောင်းချသူများထံမှ သိရသည်။
အစ္စလမ္မစ်နိုင်ငံတော်အဖွဲ့မှ တရုတ်နိုင်ငံ၊ စင်ကျန်ပြည်နယ်ရှိ ဝီဂါမိန်းကလေးများအား လိင်ကျွန်အဖြစ် ပြုစုပေးရန် ဖုန်းဆက်၍ သွေးဆောင်ကမ်းလှမ်း
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ အစ္စလမ္မစ် အကြမ်းဖက်မှုများ ဆင်နွှဲလျက်ရှိနေသော အစ္စလမ္မစ်နိုင်ငံတော်အဖွဲ့ဝင် ဂျီဟာ့ ဆင်နွှဲနေသူများမှ တရုတ်နိုင်ငံ၊ စင်ကျန်ပြည်
နယ်ရှိ ဝီဂါဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးများအား "လိင်ကျွန်" အဖြစ် ပြုစုပေးရန် သွေးဆောင်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် တရုတ်ရဲမှ ၎င်းကိစ္စကို စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်နေသည်။
ဝီဂါမိန်းကလေးများထံသို့ အစ္စလမ္မစ်နိုင်ငံတော်အဖွဲ့ဝင် ဂျီဟာ့ဒ်ဆင်နွှဲသူများမှ ၎င်းတို့အား မိန်းကလေးများမှ လိင်ကျွန်အဖြစ်ပြုစုပေးရန် သွေးဆောင်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု အွန်လိုင်း၌ ဖော်ပြချက်များကို ကိုးကား၍ နိုင်ငံတော်သတင်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
စင်ကျန်ပြည်နယ်သည် ဒေသခံ ဝီဂါမူဆလင်များက ဟန်တရုတ်များကို ဆန့်ကျင်လျက်ရှိသော မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေသည့်ဒေသဖြစ်သည်။ ဝီဂါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အရှေ့တာကစ္စတန်အစ္စလမ္မစ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (ETIM) မှ တရုတ်နိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြား၌ အကြမ်းဖက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေပြီး ဝီဂါလူငယ်များမှာလည်း အစ္စလမ္မစ်နိုင်ငံတော် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆီးရီးယား၌ ဂျီဟာ့ဒ်ဆင်နွှဲနေကြသည်။
တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဝေပို ၌ တင်ထားသော ပို့စ်တစ်ခု၌ စင်ကျန်ပြည်နယ်၊ အထက်တန်းကျောင်းများမှ ဝီဂါ ကျောင်းသူများမှာ ၎င်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သူမတို့အား ယခုပင် စာသင်ကြားမှုကို ရပ်တန့်၍ အီရတ်သို့သွားကာ အစ္စလမ္မစ်များကို လိင်ကျွန်အဖြစ် ဖြည့်ဆည်းပေးရန် သွေးဆောင်ထားဟန်တူကြောင်း ရေးသားထားသည်။
ယင်းပို့စ်မှာ တစ်ခဏချင်းပင် အများသတိပြုခံခဲ့ရပြီး ယင်းပို့စ်ကို တနင်္လာနေ့၌ ဖျက်မပစ်ခင်အချိန်ထိ ပြန်လည်ကူးတင်မှု ၂၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့သည်။
စင်ကျန်အထက်တန်းကျောင်းများမှ ဝီဂါမိန်းကလေးများစွာကလည်း ယင်းသို့သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို သူမတို့လည်း လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းထံသို့ ပြောပြခဲ့ကြသည်ဟူ၍ ယင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိတိပပသိရှိထားသူဟု ဆိုသော "စန်း" ဟူသော သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော့်ကို မိန်းကလေးတွေက ပြောပါတယ်.... သူတို့ဆီကိုလည်း ဒီလို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ အများကြီး ဝင်ပါတယ် တဲ့.... သူတို့ကို အင်ဒိုနီးရှားတစ်ဆင့် ဆီးရီးယားကိုသွား အဲဒီကလတိုက်ပွဲမြေတွေမှာ ပြုစုပေးစေချင်တာပါ တဲ့.... မိန်းကလေးတွေက အနစ်နာခံပြီး ဂျီဟာ့ဒ်ဆင်နွှဲပေးစေချင်တာပါ တဲ့... ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ ရဲကို ဒီအကြောင်း အကြောင်းမကြားခဲ့ဘူး ဆိုပါတယ်... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေက မူဆလင်တွေဆိုတာ ညီအကို မောင်နှမတွေလို့ ခံယူထားလို့ပါ တဲ့ဗျာ...." ဟု စန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ သွေးဆောင်မှုသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းမှသည် အုပ်စုလိုက်သို့တိုင် ပြန့်ပွားသွားနိုင်ကြောင်းလည်း စန်းက ဆိုခဲ့သည်။
"စင်ကျန်တော်ပိုင်း၊ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ဝီဂါဆယ်ကျော်သက်တွေ အများကြီး ရှိနေတယ်.... သူတို့တွေရဲ့ မိသားစု အခြေအနေတွေအရဆိုလျှင်တော့ အလွယ်တကူ သွေးဆောင်လို့ ရနိုင်တာပေါ့ဗျာ...." ဟု စန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
From:Myo Myint Thant
တာဝန်သိအငြိမ်းစား အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး တရုတ်လုပ် သေနတ်လေးလက်နှင့် ကျည်ဆန်များ အပ်နှံ
လေသေနတ်များကို နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းများသို့ အမြန်ဆုံး အပ်နှံရမည်ဟု ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားရာ မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် အမှတ် (၁) နယ်မြေ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အငြိမ်းစားတစ်ဦးက တရုတ်နိုင်ငံလုပ် လေသေနတ် လေးလက်နှင့် လေကျည်ဆန်များ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လာရောက်အပ်နှံခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ရှိ အမှတ် (၁) နယ်မြေ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ အငြိမ်းစား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လယ်ဘူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် တပည့်ဖြစ်သူ နှစ်ဦးက လက်ဆောင်ပေးခဲ့သဖြင့် ရယူထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် လက်ဝယ်ရှိသူများ အနေနှင့် နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းများသို့ အပ်နှံရန်၊ အပ်နှံခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသဖြင့် ၎င်း၏လက်ဝယ်တွင် ရှိသော လေသေနတ် လေးလက်နှင့် လေသေနတ် ကျည်ဆန်များကို လာရောက်အပ်နှံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
“ဘယ်နေ့မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး အပ်နှံရမယ် ဆိုတာတော့ တရားဝင် အကြောင်းကြားလာခြင်း မရှိဘူး။ မှုခင်းတစ်ခုခုဖြစ်လို့ တွေ့ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ အရေးယူသွားမှာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လာရောက်အပ်နှံသည့် သေနတ်အမျိုးအစားများမှာ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် လေသေနတ်များ ဖြစ်ပြီး သစ်သားကိုယ်ထည် အရှည်သုံးပေ၊ သုံးလက်မ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိ လေသေနတ်များ၊ လေသေနတ် ကျည်ဘူး ၁၀ ဘူး ပါဝင်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး မှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
“တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလတုန်းက ကိုင်ဆောင်တာက လုံခြုံရေးအရ ကိုင်ဆောင်တာာ။ အငြိမ်းစားယူပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ ပြန်အပ်သင့်တယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦးက မသိအောင် ကိုင်ဆောင်တာတွေ ရှိရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်” ဟု အငြိမ်းစားရဲမှူးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် လေသေနတ် ၁၁၄ လက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ယင်းလက်နက်များသည် ကျည်အစစ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ရသော ပကတိသေနတ်များနှင့် လုံးဝခွဲမရအောင် တူညီသော လက်နက်များဖြစ်၍ အယောင်ဆောင်၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်နိုင်ကာ အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း၊ သံဘောစေ့ဖြင့် ထည့်သွင်းပစ်ခတ်ရသော လက်နက်များသည် အနီးကပ် ပစ်ခတ်ပါက အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း၊ လေသေနတ်များ လက်ဝယ်ထားရှိသူများ အနေနှင့် နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းများသို့ အမြန်ဆုံး အပ်နှံကြရန်နှင့် အပ်နှံခြင်းမပြုပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စိုပြေ ပြောသည့်. ~ ထူးအိမ်သင်သီချင်း ဘယ်သူမှ မဆိုရ ~ ( သရော်စာ )
14:00 သူ့အတွေး သူ့အမြင်, သရော်စာ No comments
ယခုတစ်လော သတင်းတွေ ကြည့်လိုက်လျှင် ထူးအိမ်သင် သတင်းတွေချည်း ဖြစ်နေသည်။ သတင်းစာလည်း ထူးအိမ်သင်၊ ဂျာနယ်လည်း ထူးအိမ်သင်၊ ဖေ့ဘုတ်လည်း ထူးအိမ်သင်။
လွှတ်တော်မှာတောင် ထူးအိမ်သင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတစ်ခု ပြဋ္ဌာန်းမည်ဆိုတော့ ပိုလို့တောင် စိတ်ဝင်စားမိသည်။
ဒီလောက် ထူးအိမ်သင်နေတာ ထူးအိမ်သင်များ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ စုံစမ်းကြည့်မိတော့သည်။
သတင်းတွေ ဖတ်ကြည့်တော့ ထူးအိမ်သင် ဆယ်နှစ်ပြည့်ဆိုလား၊ ရှိုးပွဲလုပ်မည်ဟု ရေးထားကြသည်။
သီချင်းတွေ ကောင်းကောင်း မရသော်လည်း ထူးအိမ်သင် အသက်ဆယ်နှစ် ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဟု တွေးမိလိုက်သည်။ စိုပြေ မြင်ဖူးသည့် ထူးအိမ်သင်ဆိုသည့် လူ၏ ပုံသဏ္ဌာန်သည် အသက်သုံးဆယ်ကျော် အရွယ် မဟုတ်ပါလား။
စိတ်ထဲ မကျေလည်သဖြင့် အခြားသတင်းစာ တစ်စောင် ကောက်လှန်ကြည့်လိုက်တော့ ထူးအိမ်သင် ကွယ်လွန်ခြင်း ဆယ်နှစ်ပြည့်ပွဲဟု ရေးထားပြန်သည်။
ဟင် ... ထူးအိမ်သင် သေသွားပြီ။
ထူးအိမ်သင် သေသွားတာကို စိုပြေမသိ။ ထူးအိမ်သင် သီချင်းတွေ ကြိုးကြားကြိုးကြား ကြားနေရသဖြင့် ထူးအိမ်သင် ရှိသေးသည်ပဲ အောက်မေ့မိသည်။ အခွေတွေ ထွက်နေတုန်းပဲလေဟု ထင်ထားမိခဲ့သည်။ အခုတော့ ထူးအိမ်သင် သေသွားပြီ။ သေတာတောင် အခုမဟုတ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကတဲ့။
ထူးအိမ်သင် သေတာတောင် မသိလိုက်ရသဖြင့် စိုပြေ့ ကိုယ် စိုပြေ ယူကျုံးမရ ဖြစ်ရသည်။
ထူးအိမ်သင် ပရိသတ်တွေသိလျှင် စိုပြေကို စိတ်ဆိုးကြမလားမသိ။
စိတ်ဆိုးလည်း မတတ်နိုင်တော့။ စိုပြေက သီချင်းတွေ ကြားနေသေးလျှင် အဆိုတော် ရှိနေတုန်းပဲ မှတ်သည်ကိုး။
ထူးအိမ်သင်မှ မဟုတ်။ လွှမ်းမိုးတို့၊ စန္ဒရားလှထွဋ်တို့၊ ဒိုးလုံးတို့ သီချင်းတွေလည်း မကြာခဏ နားထောင်ဖြစ်သဖြင့် ထိုအဆိုတော်တွေလည်း အသက်ရှင်နေတုန်းပဲဟု စိုပြေ့စိတ်ထဲတွင် ထင်နေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်လောက်တုန်းကတောင် ဒိုးလုံး သေသွားပြီဟု ပြောသဖြင့် မဟုတ်တာ ပြောရမလားဟုဆိုကာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် ငြင်းပြီး ရန်ဖြစ်ရဖူးသည်။
ခုတော့ ... စိုပြေ ကြိုက်သည့် ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာတို့၊ အခြားခေါင်းစဉ် မမှတ်မိသော သီချင်းတွေကို ဆိုထားသည့် ကိုငှက်ခေါ် ထူးအိမ်သင်ကား သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ စိုပြေခမျာ ထူးအိမ်သင် သီချင်းတွေကို ကြိုက်သာကြိုက်တာ ဘယ်သီချင်း ခေါင်းစဉ်မှ မမှတ်မိ။ သီချင်းခေါင်းစဉ်တင်လား ဆိုတော့ မဟုတ်သေး။ အထဲက စာသားလည်း မရ။
ထူးအိမ်သင်မှ မဟုတ်ပြန်။ ခရေဇီ ဖြစ်သည့် လေးဖြူသီချင်းတွေကိုလည်း မမှတ်မိ။ သီချင်းဖွင့်ထားလျှင် နားထောင်လိုက်သည်။ ပိတ်သွားလျှင် နားမထောင်တော့။
စိုပြေ အလွတ်ရသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်မှ မရှိ။ ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းတောင် သူများတွေနဲ့ ရောဆိုမှ ဆိုတတ်သည်။ ဒါကြောင့် စိုပြေ ကေတီဗီကို ဘယ်တော့မှ မသွား။ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်လွန်းလို့ သွားလျှင်လည်း သီချင်းမဆို။ ဘီယာသာ ဖိသောက်သည်။
အခု ထူးအိမ်သင် သေသွားပြီဟု သိတော့မှ လူတွေ ထူးအိမ်သင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ဖြစ်နေကြတာလဲဟု လိုက်စုံစမ်းမိသည်။
ထူးအိမ်သင် ရှိုးပွဲမှာဆိုမည့် အဆိုတော်တွေ စာရင်းကို တင်ထားပြီး ဆဲထားသူတွေကို တွေ့ရသည်။ သူတို့ မကြိုက်သည့် အဆိုတော်တွေ ရှိုးပွဲတွင် ပါကာ ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို ဆိုမည်ဆို၍ ဆဲကြခြင်း ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ စိုပြေလည်း နားမလည်။ ဒီလို သေသွားတဲ့လူအတွက် လုပ်တဲ့ ရှိုးပွဲဆိုလျှင် လူတွေ ဝိုင်းဆိုကြတာ သဘာဝဟုသာ ထင်ထားခဲ့သည်။ ဒီလိုမျိုး အဆိုတော်တွေ အများကြီး ဆိုတော့မှ လူပိုဝင်သည်ဟုလည်း ကြားထားခဲ့ဖူးသည်။ စီစဉ်သူကလည်း ဒီလိုစီစဉ်မှ လူများပြီး တွက်ခြေကိုက်မည် ဖြစ်သည်။
အခုတော့ ဒီလို ဝိုင်းဆိုတာကို ဆဲကြပြီ။ ဒါ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အနုပညာကို ဖျက်ဆီးသူတွေဟု ဆိုကြသည်။ ပိုက်ဆံရှိလို့ အခွေထုတ်ပြီး အဆိုတော် ဖြစ်လာသူတွေဟု စွပ်စွဲကြသည်။ အနုပညာခံယူချက် မရှိသူတွေဟု စွပ်စွဲကြသည်။
ထူးအိမ်သင် ခရေဇီတွေခမျာလည်း ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆိုစေချင်ပုံ မရ။
အကြောင်းပြချက်ကတော့ ကိုငှက်သီချင်းတွေ ပျက်စီးသွားမှာ စိုး၍ဖြစ်သည်။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်သည်။ စိုပြေ ကြိုက်သည့် လွှမ်းမိုး၏ ပါးစပ်ရာဇဝင်လေး သီချင်းကို ရှိုးပွဲတွင် ဇော်ပိုင်လားမသိ ပြန်ဆိုထားသည်။ ဘယ်လိုမှ နားထောင်လို့ မကောင်းတော့။ မူရင်းအဆိုတော်က ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဆိုထားတာကို ရှိုးပွဲတွင် ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နှင့် ဆိုလို့ သီချင်းတွေ ပျက်စီးသွားတာတွေလည်း မနည်း။
ထူးအိမ်သင် ပရိသတ်က ဆိုမည့် အဆိုတော်တွေကို ဆဲကြရုံနှင့် မပြီးသေး။ အဆဲခံရသည့် အဆိုတော်၏ ပရိသတ်များကလည်း ထူးအိမ်သင် ခရေဇီများကို ပြန်ဆဲကြပြန်သည်။
အမှတ်တရ ရှိုးပွဲပဲ လူတိုင်းဆိုမှာပေါ့၊ ထူးအိမ်သင် အသံကို နားထောင်ချင်လျှင် ထူးအိမ်သင်နောက် လိုက်သွားဟု ဆိုကြသည်။ အခြားအဆိုတော်ဆိုတာ မကြိုက်ရင်လည်း ရှိုးပွဲမှာ ထူးအိမ်သင်အခွေ ဖွင့်ပြီးတော့ပဲ နားထောင်ကြဟု ပြန်ပက်၏။
ဒီလိုနှင့် တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်လာတော့သည်။
ထူးအိမ်သင်အကြောင်း မပါလျှင် မပြီးတော့။
ဒီလိုလူတွေ ဆဲကြလွန်းလို့လည်း တချို့အဖွဲ့က ရှိုးပွဲမှ ထွက်သွားပြီး ထူးအိမ်သင် ခရေဇီကိုလည်း Fuck you ဆိုသွားသည်။ အဲ့တော့ ပရိသတ်က ထမင်းကျွေးထားတာကို ပရိသတ်ကို စော်ကားတာဟု ဆိုကြပြန်သည်။
ထူးအိမ်သင် ပရိသတ် ဆဲကြသည့် အချို့ အဆိုတော်တွေကိုတော့ ထူးအိမ်သင် သမီးလေးက ကြိုက်သဖြင့် ရှိုးပွဲတွင် ထည့်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။
သူတို့တင် မဟုတ်။ ထူးအိမ်သင်ကို ခရေဇီဖြစ်သည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း ထူးအိမ်သင်သီချင်းကို အခြားလူတွေဆိုတာ မကြိုက်။ ယုတ်စွအဆုံး ကေတီဗီမှာတောင် ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို မဆိုစေချင်ကြ။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေခမျာ နေပြည်တော်က ကေတီဗီတွေကို ရောက်တိုင်း ထူးအိမ်သင်သီချင်းကို အခြားလူတွေ ဆိုနေတာ ကြားရလျှင် မခံစားနိုင်။ သူတို့သာ ဆိုချင်ဆိုမည်။ ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို အခြားလူတွေဆိုတာ မကြိုက်ကြ။ အခုလို အခြား ဟစ်ဟော့ အဆိုတော်တွေ၊ ပေါ့အဆိုတော်တွေက တိုင်းသိပြည်သိ ဆိုမည်ဆိုတော့ ပိုလို့တောင် စိတ်ဆိုးသည်။
ဒါကြောင့် လွှတ်တော်ပြန်စလျှင် အရေးကြီး ကြယ်ပွင့်ပြ အဆိုတစ်ခုတင်ပြီး ဥပဒေတစ်ခု ပြဋ္ဌာန်းရန် ကြံစည်နေကြသည်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အတွင်းသတင်းများအရ စိုပြေ သိရလေသည်။
ယင်းဥပဒေကတော့ ထူးအိမ်သင် သီချင်းများကို အကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ ဖြစ်သည်။
ထိုဥပဒေအရ ထူးအိမ်သင်သီချင်းကို လူတိုင်း ဆိုနိုင်တော့မည် မဟုတ်။ ထူးအိမ်သင် အသံနှင့် တူကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက ထောက်ခံချက်ပေးမှသာ ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထူးအိမ်သင်နှင့် အသံမတူသူတွေ၊ ဟစ်ဟော့ အဆိုတော်တွေ၊ ပန့်အဆိုတော်တွေခမျာ ထိုဥပဒေအရ ထူးအိမ်သင်သီချင်းကို ဆိုခွင့်ရတော့မည် မဟုတ်။
ကေတီဗီများတွင်လည်း ထူးအိမ်သင်သီချင်းကို ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်၏။ အသံသေး အသံကြောင်ဖြင့် ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို ဆိုလျှင်တော့ ဥပဒေအရ ထောင်ချခံရမည်။ ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို ယောင်လို့မှ ညည်းခွင့်ရတော့မည် မဟုတ်။
ထိုဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်လျှင် ဘယ်သူတွေဆဲပြီး ဘယ်သူတွေ သြဘာပေးကြမလဲ ဆိုသည်ကိုတော့ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။
13:00 ဘာသာရေး, သတင်း No comments
မွန်ဘုရင် ဓမ္မစေတီမင်း သွန်းလုပ် လှူဒါန်းခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ရှာဖွေမှုကို ဆလုံလူမျိုး ရေငုပ်သမား ၁၀ ဦးအပါအဝင် လူအင်အား ၈၀ ခန့်နဲ့ သောင်တူး သင်္ဘောတစ်စီး၊ သုံးထပ်သင်္ဘောတစ်စီး တို့နဲ့ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီးတော့ ရှာပုံတော်ဖွင့်နေတာပါ။
မြန်မာ့နည်း၊ မြန်မာ့ဟန် ဂမ္ဘီရအကူအညီ၊ ပရလောက အကူအညီတွေနဲ့ ရှာဖွေချိန် တစ်ပတ်ကနေ တစ်လအတွင်း ဆယ်ယူ ရရှိနိုင်မယ်လို့ ခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူနေတဲ့ နေရာနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒေါပုံ သင်္ဘောကျင်း ဆိပ်ကမ်းမှာ လူတစ်ထောင်ဝန်းကျင် နေ့စဉ်လာရောက် ကြည့်ရှုလျက် ရှိပါတယ်။..
Miss Myanmar International 2014ဆု ခင်ဝေဖြိုးဟန်ရရှိ
10:00 အနုပညာလောက သတင်း No comments
Miss Myanmar International 2014 ပြိုင်ပွဲကို သြဂုတ် ၁၇ ရက်ညက အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြိုင်ပွဲဝင် ခါးနံပါတ် ၁၆ ခင်ဝေဖြိုးဟန်က Title ဆု ရရှိခဲ့သည်။
အခြား ဆုများအနေဖြင့် 1st Runner Up ဆုကို ခါးနံပါတ် ၁၈ မေဘရဏီသော်က ရရှိခဲ့ပြီး 2nd Runner Up ဆုကို Thadar Mariah ကရရှိခဲ့သည်။
ပဲခူးရေဘေးသင့်ဒေသများအတွက် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် HGC ယူနစ်အသီးသီးက ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော် လှူဒါန်း
ထူးဖောင်ဒေးရှင်း နာယက ဦးတေဇ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် Htoo Group of Companies ယူနစ်အသီးသီးက ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ ရေဘေးသင့် ဒေသများအတွက် အလှူငွေကျပ်သိန်းပေါင်း (၄၀၀)ကျော် တန်ဖိုးရှိသည် ငွေနှင့် အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ပဲခူးခရိုင်၊ ပဲခူးမြို့တွင် တည်ရှိသော ဗုဒ္ဓသာသနဗိမ္မာန် စိတ္တသုခခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး ကွပ်ကဲမှုရုံးသို့ ထူးထရေးဒင်းကုမ္ပဏီက ငွေကျပ် သိန်း(၅၀)၊ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းက သိန်း(၅၀)နှင့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်း နာယက ဦးတေဇ၏ မိခင်ကြီး အမေအုန်း၏ အသက် (၈၀)ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြင့် ဦးတေဇ မိသားစုများက ငွေကျပ် သိန်း(၈၀)ကို ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံပြီး ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
လှူဒါန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးဖောင်ဒေးရှင်း စီအီးအို ဦးပေါ်မြင့်ဦးက ထူးဖောင်ဒေးရှင်း နာယကဖြစ်သူ ဦးတေဇ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရေဘေးသင့် ဒေသများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လှူဒါန်းခွင့်ရသည့်အတွက် ၀မ်းသာပါကြောင်းနှင့် အလှူအတွက် ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးကြသည့် Htoo Group of Companies ရှိ ယူနစ်အသီးသီးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထွဋ်က ကယ်ဆယ်ရေးကာလအပြင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကာလတွင်ပါ ကူညီလှူဒါန်းပေးသဖြင့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် အလှူရှင်များကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ လှူဒါန်းငွေများကို ရေဘေးသင့် ဒေသများတွင် အထိရောက်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံး အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Htoo Group of Companies ယူနစ် အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ဥဿာမြို့သစ်ရှိ ဒက္ခိဏသာခါရာမကျောင်းတိုက်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနှင့် သနပ်ပင်မြို့နယ်ရှိ မင်းရွာသို့ ဆက်လက် သွားရောက်ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူများ လက်ဝယ်အရောက် လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Htoo Group of Companies ယူနစ်အသီးသီးက ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း (၂)ခုသို့ လှူဒါန်းရာတွင် ဆန်အိတ်ပေါင်း(၁၀၀)၊ ဆေးဝါးများထည့်ထားသည့်သေတ္တာ(First Aid Kit) (၁၀၀)လုံး၊ သောက်ရေသန့်ဗူးများ၊ အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ၊ အစားအစာများ၊ အ၀တ်အထည်များနှင့် ကျောင်းသားများအတွက် ကျောပိုးအိတ်များ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ဒက္ခိဏသာခါရာမကျောင်းတိုက်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှ ကိုဆန်းကိုဦးက “တစ်ချို့ မိသားစုတွေက အတော်ကြီးကို ချို့တဲ့ကြတယ်၊ အခုလိုလာပြီး လှူဒါန်းတာမြင်ရတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ပီတီဖြစ်မိတယ်ဗျာ” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မှုလတန်းကျောင်းသူ တစ်ဦး ဖြစ်သော မနှင်းကလျာဦးကလည်း “ သမီးတော့ မုန့်တွေလည်း ရတယ်၊ ကျောပိုးအိတ်လည်းရ လို့ အရမ်းပျော်တာပဲ” ဟု ပြောပြသည်။
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် အဖွဲ့သည် ပဲခူးမြို့ပေါ်မှ ၁၇ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော သနပ်ပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မင်းရွာတွင် လှူဒါန်းမှု ပြုခဲ့ရာ၌ ထိုရွာရှိ ရေဘေးဒုက္ခခံစားရသည့် အိမ်ထောင်စု(၈၀)အား တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ထောက်ပံ့ငွေ ၂၅၀၀၀ ကျပ်နှင့် မိုးကာတစ်ထည်စီအား သီးသန့် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မူလတန်းကျောင်းသား ၃၀၀ ဦးအား မုန့်များနှင့် တစ်ဦးလျှင် မုန့်ဖိုး ၁၀၀၀ ကျပ် ပေးဝေခဲ့သည်။
ယနေ့ ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Htoo Group of Companies ယူနစ်အသီးသီးမှ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ ရေဘေးသင့် ဒေသများသို့ လှူဒါန်းခဲ့သည့် အလှူငွေနှင့် အထောက်အပံ့ပစ္စည်း အသီးသီး၏ စုစုပေါင်း တန်ဖိုးမှာ ကျပ်ငွေ (၄၃၈၉၄၅၀) ဖြစ်ပါသည်။
From: Htoo Foundation
08:00 ဟာသ No comments
ပထွေးနေရာတွင် အောင်ခိုင် စိုင်းအောင်တင့် ဆိုပါက မင်းသမီး ပိပိရိရိနေသော်လည်း မုဒိမ်းမှုကျိန်းသေဖြစ်မည်
သို့သော် ဘယ်သောအခါမှ အထမမြောက်ပါ
ပထွေးနေရာတွင် မင်းသားဆိုပါက မယားပါသမီးနှင့် မီးပျက်သောညတွင် နှစ်ယောက်တည်းနေပါသော်လည်း ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါ
သို့သော် လူတိုင်းက အထင်လွဲမည်
မိထွေးနေရာတွင် ခင်မို့မို့အေး စံပါယ်မိုးတို့ ဆိုပါက သေချာပေါက် အကောက်ကြံမည်ဖြစ်သော်လည်း
အခြားမင်းသမီးကြီးဆိုပါက အမေအရင်းထက်ပင် ကောင်းနိုင်သည်
ထို့ကြောင့် သင့်မိဘ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပါက စိုင်းအောင်တင့် အောင်ခိုင် ခင်မို့မို့အေး စံပါယ်မိုး တို့နှင့် ရုပ်ဆင်သောသူများကို သဘောမတူသင့်ပါ
ရန်အောင် ရဲအောင် မို့မို့မြင့်အောင် တို့နှင့် ရုပ်ဆင်သောသူများကိုသာ အထူးအားပေး သဘောတူသင့်သည်။
သားသမီးနေရာတွင် မှဲ့ကြီးတို့အဖွဲ့ ဖြစ်ပါက သေချာပေါက် မိဘကျေးဇူးကန်းမည် ဖြစ်သော်လည်း
မင်းသား မင်းသမီး ဆိုပါက ပေတေဆိုးသွမ်းစေကာမူ မိဘကျေးဇူးကို အထူးသိတတ်သူဖြစ်လာမည်
ထို့ကြောင့် မိဘများအနေနှင့် သားသမီးရုပ်ကို အထူးဂရုစိုက်ပါ
ကြီးလာလေလေ မှဲ့ကြီး စံပါယ်မိုး တို့ ရုပ်နှင့်ဆင်လာပါက စောစောစီးစီး အိမ်ပေါ်မှ မောင်းချထားသင့်သည်။
အစပိုင်း ရန်အလွန်ဖြစ်နေပါက နောက်ပိုင်းညားရန် သေချာသလောက် ဖြစ်သည်
ထို့ကြောင့် ရပ်ကွက်ထဲမှ ရန်အလွန်ဖြစ်သူများကို ဘိသိတ်ဆရာက ကြိုစရန်ရိုက်ထားသင့်သည်။
နှစ်ဘက်လူကြီးများ ဆုံတွေ့ပါက ငယ်သူငယ်ချင်း ငယ်ချစ်များ ရည်းစားလုဘက်များ ဖြစ်နေတတ်သည်
ထို့ကြောင့် လူငယ်များအနေနှင့် နှစ်ဘက်လူကြီးများဆုံတွေ့ပါက ပြေးပေါက်ကြိုရှာထားပါ
အသက်ကြီးယောက်ျားများမှာ မုဆိုးဖို တခုလပ်တို့ ဖြစ်တတ်သော်လည်း သူနှင့်တွဲရမည့် မင်းသမီးကြီးများမှာ 100% ရေမရောသော အပျိုကြီးများသာ ဖြစ်သည်
တခုလပ် တလင်ကွာ ဆိုသည်နှင့် ထိုဇာတ်ကောင်မှာ လူကြမ်းဖြစ်ရန် ၉၀ရာနှုန်းသေချာသည်။
ဤကား မြန်မာဗီဒီယို လောကနီတိ ဖြစ်ပါသတည်း။ မှတ်လော့
From: Ko Oo